फेरि बढ्यो डलरको भाउ, कुन देशको विनियम दर कति ? जान्नुहोस् | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more
फेरि बढ्यो डलरको भाउ, कुन देशको विनियम दर कति ? जान्नुहोस्
साउन २९ गते, २०७६ - १९:२३
काठमाडौं । आज अमेरिकी डलर, कुवेत दिनार र बहराईन दिनार सहित प्राय सबै देशको भाउ उकालो लागेको छ। आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर १२३ रुपैयाँ ९५ पैसा रहेको छ भने बिक्रदर ११४ रुपैयाँ १५५ पैसा रहेको छ। हिजो अमेरिकी डलरको भाउ ११२ रुपैयाँ ९९ पैसा रहेको थियो।
त्यस्तै युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १३७ रुपैयाँ ६७ पैसा र बिक्रिदर १३८ रुपैयाँ ४० पैसा रहेको छ। साउदी रियाल एकको खरिददर ३० रुपैयाँ ३८ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३० रुपैयाँ ४६ पैसा रहेको छ।
त्यस्तै कतारी रियाल एकको खरिददर ३१ रुपैयाँ ३० पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३१ रुपैयाँ ४६ पैसा रहेको छ। युएई दिराम एकको खरिददर ३१ रुपैयाँ २ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३१ रुपैयाँ १९ पैसा रहेको छ। मलेसियन रिँगिट एकको खरिददर २७ रुपैयाँ १५ पैसा तथा बिक्रिदर २७ रुपैयाँ २९ पैसा रहेको छ।
यस्तो छ अन्य देशको विनियम दर
साउन २९ गते, २०७६ - १९:२३ मा प्रकाशित
चार महिनामै नेपालीले चपाए साढे १८ करोडकाे चुइगम
बढ्याे पाउण्ड स्ट्रलिङकाे भाउ, यस्ताे छ आजकाे विनिमयदर